July Dream: Unlucky Week
Khin Thuzar Thin said...
ငှက်ချေးပါချရင် ကံကောင်းတယ်လို့တော့ ပြောသံကြားတယ်. :)
My country is ရွှေပြည်ကြီး
Whatever I do, whenever I live, I am Myanmar and I always love my country.
whatever my country happen, Myanmar is Myanmar.
စိတ်ထဲမှာ အရမ်းမညစ်နဲ့ 
ဘဝဆိုတာက ကံဆိုး ကံကောင်း တလှည့်စီပါပဲလေ။ ဗုံလုံတလှည့် ငါးပျံတလှည့် ဘဝပဲ ဆိုတော့ ကံမကောင်းလည်း အားတင်းထားပါဗျို့။